Turkiga oo markii ugu horreeysey Jimcaha laga heli doono Samsung dalkaa lagu sameeyey & faa’iido wayn oo ku jirta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo markii ugu horreeysey Jimcaha laga heli doono Samsung dalkaa lagu...
(Istanbul) 19 Jan 2021 – Sharikadda South Korean-ka ah ee dhanka elektaroonigga ee Samsung ayaa bilowday inay Turkiga markii ugu horreeysey kusoo saarto telefoonadeeda, iyadoo la kaashanaysa sharikadda maxalliga ah ee Atmaca Elektronik.
Telefoonnadii ugu horreeyey ee Turkish samee ah ayaa suuqa soo gelaya Jimcaha soo aaddan, taasoo ka dhigan in sicirka telefoonnada Samsung uu Turkiga hoos uga dhici doono 40%, taasoo ay shacabku mahdin doonaan.
Hardanka camaaliqooyinka tiknolojiyadda iyo agabka elektaroonigga ayaa ku xoogaysanaya Turkiga, iyadoo ay sharikadda Chinese-ka ah ee Oppo ay iyaduna wax soo saarkeeda ka bilaabayso degmada wershadaysan ee Istanbul ee Tuzla, halka Samsung ay wax kasta dhamaystirtay, sida uu qorayo warqaadka Dünya.
Samsung, oo 40% iyadu haysata suuqa telefoonnada Turkiga ayaa heshiis wax soo wada saar la gashay sharikadda Atmaca Elektronik oo sidoo kale bilo kahor bilowday inay soo saarto TV-yada Samsung, iyadoo haatan samaysa 4 ka mid ah 10-kii TV ee ay Samsung Turkiga keento, iyadoo sidoo kale heshiis wada shaqayneed kula jirta sharikadda agabka elektaroonigga reer Holland ee Philips.
Atmaca ayaa telefoonnada Samsung ku samaynaysa wershado ku yaalla degmada Istanbul ka tirsan ee Esenyurt, waxayna Atmaca iyo Samsung beegsanayaan inay sanadkii soo saaraan 3 milyan oo telefoon gacmeed.
Previous articleWEJI CUSUB: Imaaraadka oo hakiyey fiise dhaafkii dadka Israel kaddib markii dadkeeda karaantiil lagu soo rogey
Next articleTOOS u daawo: Leicester City vs Chelsea, AS Roma vs Spezia – LIVE (Shaxda Sugan)